Dhawunirodha iyo MIUI 12 Yakavharwa Beta yeXiaomi neRedmi zvishandiso
Kwidziridzo 4 (05/26/2020 @ 07:14 AM ET): Yakawedzerwa download link ye MIUI 12 dzichangoburwa beta inovakwa, yakanyorwa muna Chivabvu 26, 2020.
Kwidziridzo 3 (05/21/2020 @ 07:05 AM ET): Yakawedzerwa download link yeMIUI 12 ichangoburwa beta inovakwa, yakanyorwa muna Chivabvu 21, 2020.
Kwidziridzo 2 (05/18/2020 @ 07:25 AM ET): Yakawedzerwa download link yeMIUI 12 ichangoburwa beta inovakwa, yakanyorwa muna Chivabvu 18, 2020.
Kwidziridzo 1 (05/11/2020 @ 09:30 AM ET): MIUI 12 yakavharwa beta yekushandisa download zvawedzeredzwa pamwe neitsva kuburitswa (yakanyorwa munaMay 11). Chinyorwa chakabudiswa muna Kubvumbi 28, 2020, chakachengetwa pazasi.
Iyo yazvino vhezheni yeiyo Xiaomi tsika Android ganda - MIUI 12 - pakupedzisira iri pano. Iyo kambani yakanda chidzitiro nezuro, padivi Mi 10 Vechidiki Edition kutanga chiitiko muChina. Kuenzaniswa neMIUI 11, iyo yakagadzika vhezheni yacho yaive akasunungurwa zvisingasviki mwedzi mitanhatu yapfuura, MIUI 12 inounza yakajeka yakawanda yekuvandudza, kuona kwekuwedzeredza, uye zvakawanda zvitsva zvinhu. Tatova nazvo rakabviswa iyo mitsva yemifananidzo, uye ikozvino tiri kupa iyo yekurodha mafaira ekutanga seti MIUI 12 beta firmware mapakeji eboka reXiaomi neRedmi zvishandiso.
Zvakakosha kutaura kuti izvi yakavharwa beta anovaka anoitirwa maChinese akasiyana, seXiaomi kumisa kubudiswa kweMIUI yenyika yose beta kubvira gore rapfuura. Semhedzisiro, iwe unofanirwa kupenyerera idzi ROMs dzinoshandisa TWRP kupfuudza iyo MIUI beta account whitelisting. Usatarisire Google Play Services kana chero yakafanorongedzerwa kuGoogle kuiswa mukati mavo. Sarudzo dzemitauro dzinogona kugumira kuChirungu neChinese chete, zvakare. Xiaomi akadaro kuvhura MIUI 12 pasirese, uye isu takamirira anovaka kuti aoneke zvakare izvo. Zvichakadaro, iwe unogona kuyedza kunze mabheti akavharwa kubva kuChina.
Iyo beta MIUI 12 inovaka yakanyorwa pazasi inova kubva kune chero Android Pie kana Android 10, zvinoenderana nemudziyo.
Dhawunorodha: MIUI 12
Unogona kudhawunirodha yazvino beta (20.5.26) yeMIUI 12 yechigadzirwa chako kubva pane zvakabatanidzwa pazasi. Iwe unogona zvakare kushanyira maforamu edu akabatana kuitira kana iwe uchida rumwe rubatsiro. Nepo zvese izvi zvekurodha zvinongedzo zvakananga kubva kuXiaomi, vashandisi vanorayirwa kuti vaenderere panjodzi yavo. Tinokunyevera zvakare, izvi ndizvo haina kuitirwa muvhareji mutengi uye inokurudzirwa chete kune vashandisi vakasununguka nemagetsi anopenya ROM.
Mudziyo, Chishandiso Codename, XDA forum Link
Dhawunirodha Unganidzo (20.5.26)
1. Redmi Tarira 8 Pro (begonia) Android 10 Download
3. Mi Sanganisa 2 (chiron) Android 9 Download
4. Mi 10 Pro (cmi) Android 10 -
6. Redmi K20 / Mi 9T (davinci) Android 10 Download
8. Mi 8 Pro (equleus) Android 10 Download
9. Mi 9 se (GRUSI) Android 10 Download
10. Mi Cherechedzo 3 (jasoni) Android 9 Download
11. Redmi Cherechedzo 7 / 7S (lavender) Android 10 Download
14. Mi Max 3 (senitrogen) Android 10 -
15. Mi Mix 3 (mutserendende) Android 10 Download
16. Redmi K30 5G (pikicha) Android 10 Download
17. Mi 8 Lite (Platina) Android 10 Download
18. POCO X2 / Redmi K30 4G (phoenix) Android 10 Download
19. Mi Sanganisa 2S (polaris) Android 10 -
20. Mi 9 Lite / Mi CC9 (pyxis) Android 10 Download
21. Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro (raphael) Android 10 Download
24. Mi Cherechedzo 10 / Mi CC9 Pro (tucana) Android 10 Download
25. Mi 10 (umi) Android 10 -
26. Mi 8 Yekutsikisa Edition (ursa) Android 10 Download
28. Redmi Cherechedzo 7 Pro (violet) Android 10 Download
29. Mi 6X (nzira) Android 9 Download
30. Redmi Ona 5 / Redmi Ona 5 Pro (Nei) Android 9 Download
Zvinongedzo zvevakapfuura beta anovaka MIUI 12 zvakachengetedzwa zvakare:
MIUI 12 (20.5.21) Download Downloads
Dhawunirodha Unganidzo (20.5.21)
13. Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi) Android 10 Download
14. Mi Max 3 (senitrogen) Android 10 Download
19. Mi Sanganisa 2S (polaris) Android 10 Download
MIUI 12 (20.5.18) Download Downloads
Dhawunirodha Unganidzo (20.5.18)
11. Redmi Cherechedzo 7 / 7S (lavender) Android 10 -
MIUI 12 (20.5.11) Download Downloads
Dhawunirodha Unganidzo (20.5.11)
MIUI 12 (20.4.27) Download Downloads
Dhawunirodha Unganidzo (20.4.27)
12. Mi Max 3 (senitrogen) Android 10 Download
13. Mi Mix 3 (mutserendende) Android 10 Download
14. Redmi K30 5G (pikicha) Android 10 Download
16. POCO X2 / Redmi K30 4G (phoenix) Android 10 Download
17. Mi Sanganisa 2S (polaris) Android 10 Download
18. Mi 9 Lite / Mi CC9 (pyxis) Android 10 Download
19. Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro (raphael) Android 10 Download
22. Mi Cherechedzo 10 / Mi CC9 Pro (tucana) Android 10 Download
24. Mi 8 Yekutsikisa Edition (ursa) Android 10 Download
26. Redmi Cherechedzo 7 Pro (violet) Android 10 Download
27. Mi 6X (nzira) Android 9 Download
28. Redmi Ona 5 / Redmi Ona 5 Pro (Nei) Android 9 Download
Iyo yakazara changelog yeMIUI 12 beta, kana ichivandudzwa kubva kuMIUI 11, iri seiyi:
MIUI 12. Wako ndega.
Chitsva: Zvese-zvitsva zvemuviri-zvakavakirwa pamhepo enjini yekumhanyisa zvigadzirwa zvinozorodza kutaridzika kwemushini wako.
Chinyowani: Dhijitari yewindows tekinoroji inotora inoshandura skrini kutarisa kune imwe nhanho.
Brand new visual design inoshanda kune ese marudzi ezvinyorwa uye mitauro.
Magazini-nhanho marongero anounza zvinhu zvakakosha muchivhenekeri uye anoita kuti chimiro chemukati chive chakajeka.
Chitsva: MIUI 12 ndiyo yekutanga-yakavakirwa mobile OS iyo yakafamba kuburikidza neakaomesesa yakawedzera kuvanzika yekudzivirira kuyedzwa.
Chitsva: Dzorera yako kifaa ID uye dzora mashandisiro ainoita zvichibva pane chaiyo ID technology.
Chitsva: Mvumo yeMvumo iyo ichashandiswa chete iwe uchishandisa app.
Chitsva: Iwe unogona zvakare kupa mvumo kamwe chete, wozofunga zvakare inotevera kana mvumo ichidikanwa.
Chitsva: Regedza kupinda kwefoni kurunhare rwechitatu.
Chitsva: Dzorera asina mabhaisikopo kumaapps ayo anoda ruzivo rwevanhu.
Chitsva: Gamuchirwa zviziviso pese pazvinogadziriswa zvinyorwa, shandisa kamera, kana kuwana nzvimbo yako.
Chitsva: Shandisa kugoverana kwakachengeteka kudzora izvo zvimwe data zvinotumirwa pamwe nezvinhu zvakagovaniswa.
Chitsva: Tora zvizere zvitore pane mashandisirwo emashandisi anoita mvumo munhoroondo yeApp maitiro.
Chitsva: Shanyira zvakavanzika.miui.com kudzidza kuti MIUI inodzivirira sei yako pakavanzika.
Kugadziridza: Mapurogiramu haatenderwi kutanga mamwe maapuro kumashure.
AI Fonera Mubatsiri
Nyowani: Mi AI inogona kupindura mafoni ako izvozvi!
Chitsva: Unogona kurekodha yakakwenenzverwa kukwazisa iyo ichaimbirwa mumwe munhu panguva yeAI mafoni.
Chitsva: Nyowani dzakakwenenzverwa dzinotsigirwa kune dzinobuda mafoni.
Chitsva: Zvese-zvitsva zveXiaomi Utano zvinokupa zvimwe sarudzo uye zvinoita kuti hutano hwako huve hwakanyanya.
Chitsva: Isa chishandiso chako padhuze newe usati warara kuti uongorore kutenderera kwako kwekurara uye rekodhi yekutaura uye snoring.
Chitsva: Unogona kuyananisa data neanotsigira anogona kupfeka uye akangwara michina yemumba.
Chitsva: Hutano hweXiaomi hunogona kukuyeuchidza kuti usimuke uye ufambe kana paona kuti wanga wakagara pasi kwenguva yakareba.
Chitsva: Iyo app inoongororawo zvitambi zvako uye inokupa iwe zano rehutano risingaperi.
Chitsva: Swipe pasi kubva pakona yekumusoro rekona yako kuti uvhure Kudzora nzvimbo.
Chitsva: Mifananidzo mifananidzo inofadza kutarisa!
Chitsva: Mi Ditto inosanganisa kuudzwa uye kuburitsa kutaura, zvichiita kuti nharembozha dzive nyore kune vanhu vane dambudziko rekushandisa smartphones dzakagadzirwa.
Chitsva: Zvemigwagwa uye yakakurudzirwa nzira kuenda kunhandare yendege uye kuzvitima zviteshi.
Chitsva: Unogona kuongorora ako apfuura nzendo ikozvino.
Chitsva: Zvinyorwa zvekutarisisa.
Nyowani: Maaramu evanosvika muchitima vanosvika.
Mi Vanotakura Mabasa
Chitsva: Wona yako SIM chiyero uye mobile data yekushandisa stats.
Chitsva: Chengetedza nhamba dzefoni dzinoshandiswa kakawanda kukwirisa bhaidhi uye utenge nharembozha gare gare.
Chitsva: Tenga SIM makadhi uye masevhisi.
Chitsva: Miyalezo yekusimudzira yakarongedzwa maererano nezvavari izvozvi.
Status bar, Mvuri wekuzivisa
Chitsva: Zvese-nyowani dhizaini.
Mutsva: Mifananidzo mitsva inounza mamiriro ekunze kubva kunze kunanga kune yako skrini.
Chitsva: chengetedzo inounza zvitsva zvizere zvakavanzika zvekuchengetedza nzira.
Chitsva: Lite mode inorerutsa chishandiso chako uye chinounza akakosha maficha kumberi.
Chitsva: Shandisa iyo nzira pfupi inoyerera kuchera uye kurongedza zvinhu, pamwe nekuchinja kwekuona.
Nyowani: Nyowani nyowani yakarongedzwa kutaridzika kwenzvimbo iripo ikozvino.
Chitsva: Isu takawedzera akawanda maficha emifananidzo ayo anozoperekedza zviito zvako.
Chitsva: Makadhi eKarenda anokuyeuchidza nezve zviitiko zvakakosha uye mahedhesheni.
Chitsva: Unogona kugadzira maforodha ane zvinyorwa zvino.
Nyowani: Nyowani dzakasimba dzekusimudzira dzinotaridzika zvakanaka!
Nyowani: Mabasa anopedzwa nehupenyu hunogutsa izvozvi.
Chitsva: Zvinyorwa zve subtasks zvinoita kuti kutonga kwako kunyore kuve nyore.
Chitsva: Mifananidzo mitsva inonzwa yakasikwa uye inozorodza.
Chitsva: Chengetedza imba yako yakachengetedzeka neyekuchenjera imba mudziyo kunyevera.
Chitsva: Kubatanidza mabhaisikopu ako aunofarira kuchave kwakanyanya kunaka neyeedu vhidhiyo rekushandisa bhokisi.
Chitsva: Vakagovana mhuri chengetedzo chirongwa chiripo izvozvi.
The post [Kwidziridzo: Chivabvu 26 inovaka] Dhawunirodha iyo MIUI 12 Yakavharwa Beta yeXiaomi neRedmi zvishandiso yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Xiaomi Mi 10 Ongororo - Redefining Mi sePrimrim Smartphone Brand
MIUI 12 inogona kuvhura pasi rose muna Chivabvu 19
Xiaomi Redmi Y2 kudzokorora: Feature-rich selfie-kamera foni yevatengi vemari
Xiaomi Redmi 6 Pro kuongororwa: Bhabhironi rakapoteredzwa